ISundowns ilule inkontileka yomunye umdlali | News24
ISundowns ilule inkontileka yomunye umdlali
Cape Town – IMamelodi Sundowns isilule inkontileka kaSiyanda Zwane ngenye isizini ngemuva kokuthatha isinqumo sokusebenzisa isivumelwano sokukhetha ukuvuselela ngonyaka owodwa.
UZwane ujoyina abanye babadlali baleli qembu okubalwa kubo uLeonardo Castro kanye noWayne Arendse ngokulula inkontileka neqembu kanjalo nokusebenzisa ukukhetha ukuvuselela nobekuyingxenye yezivumelwano zabo.
Lo mdlali oneminyaka engu-31 ubudala manje usezongenela kwisizini yakhe yesine kumaBrazilian ngonyaka ka-2017/18, ngemuva kokujoyina leli qembu evela kuGolden Arrows ngonyaka ka-2014.
Umphathi walo mdlali, uMandla Mthembu, uqinisekise lezi zindaba ku-website yeSoccer Laduma.
“Ngokombiko ovela ekilabhini, uSiyanda uthandeka kakhulu futhi unomthelela omuhle ezindlini yokugqokela,” kusho uMthembu.
UMthembu uthi ubenethemba lokuthi alulele ikilayenti lakhe inkontileka yesikhathi eside, engeza ngokuthi: “Sengikushilo lokho, sisaxoxisana nekilabhu emizamweni yovikela ikusasa lakhe lesikhathi eside.
“Asifuni isimo lapho ngemuva kwezinyanga ezingu-6 ezithola enongabazane ngekusasa lakhe. Ufuna ukuvikeleka ukuze ezogxila ngokuphelele enkundleni yezemidlalo.”
Lo mdlali odlala ngasesandleni sokudla emuva useke wadlala izikhathi ezimbalwa eqenjini lesizwe iBafana Bafana, kanti udlale imidlalo engu-16 kwezikaPitso Mosimane ngesizini edlule.